eHimalaya Online || News from nepal » निलो ड्रेसमा धपक्कै बलेकी बानी कपुर बो,ल्ड देखिनुको नि सिमा हुन्छ नि ? यी तस्बिर साझा गर्दै “क्याप्सन मा लेखिन यो फोटो देख्नुभयो भने आ,गोको ज्वाला फु,ट्न सक्छ”।
निलो ड्रेसमा धपक्कै बलेकी बानी कपुर बो,ल्ड देखिनुको नि सिमा हुन्छ नि ? यी तस्बिर साझा गर्दै “क्याप्सन मा लेखिन यो फोटो देख्नुभयो भने आ,गोको ज्वाला फु,ट्न सक्छ”।
२०७७ चैत ९ गते सोमबार १०:३२
बलिउडकी सुन्दर र स्टाइलिश अभिनेत्री वाणी कपूर उनको ग्लैमरस लुकको बारेमा धेरै चर्चामा छिन्। उनले सोशल मिडियामा आफैंले फोटो साझा गरेकि छिन।, जुन धेरै भाइरल भइरहेको छ। यो फोटो इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकि छिन। उनले अहिलेसम्म यो बो,ल्ड...
बलिउडकी सुन्दर र स्टाइलिश अभिनेत्री वाणी कपूर उनको ग्लैमरस लुकको बारेमा धेरै चर्चामा छिन्। उनले सोशल मिडियामा आफैंले फोटो साझा गरेकि छिन।, जुन धेरै भाइरल भइरहेको छ। यो फोटो इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकि छिन। उनले अहिलेसम्म यो बो,ल्ड ड्रे,समा लाखौं लाइक गरेका छन। तपाईं पनि यिनको यो फोटो देख्नु भयो भने आँखा नहटाइ हेर्नू हुनेछ ।
वाणीले साझा गरेको फोटोमा उनी निलो बो,ल्ड ड्रेसमा देखिन्छिन। पोशाकमा साइट काट्ने खुट्टा शैलीले उनलाइ धेरै बो,ल्ड लुक दिइरहेको छ। उनको साधारण लुकको बावजुद, वानी यस स्टाइलिश र बो,ल्ड ड्रे,समा धेरै ग्लैमरस देखिन्छिन्। यिनि भुँइमा बसिरहेको बेला क्यामेराको अगाडि पोज गरिरहेको देखिन्छ। तस्विर साझा गर्ने क्रममा वाणीले क्याप्शनमा लेखेकी छिन तपाईं यो फोटो देख्नुभयो भने – आ,गोको ज्वाला फुट्न सक्छ।
कामको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा, वाणीले उनको-बर्षको क्यारियरको अवधिमा केवल केही बलिउड फिल्महरूमा काम गरिन। तर उनले खेलेका धेरैजसो चलचित्रहरू हिट भए 2013 मा, उनले शुद् देसी रोमान्स फिल्मबाट फिल्म शुरुवात गरिन यस फिल्मबाट उनले फिल्मफेयरबाट सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार पनि प्राप्त गरिन। वाणी अन्तिम पटक फिल्म यु,द्धमा रितिक रोशन र टाइगर श्रॉफसँगै देखिएकि छिन।
प्रकाशित मिति २०७७ चैत ९ गते सोमबार १०:३२